Wararka Caalamka – HalQaran.com
Wiil 13 sano jir ah oo u geeriyooday cudurka Coronavirus & dunida oo fajac ku noqotay
London (Halqaran.com) – Dhibbanihii ugu da’da yaraa adduunka ayaa ugu geeriyooday cudurka Coronavirus magaalada London ee dalka Ingiriiska. Ismacil Mohamed Abdulwahab, waa wiil 13 sano jir ah oo ka soo…
Madaxweyne Trump oo xaalad deg-deg ah geliyay dalka Mareykanka, kaddib markii uu…
by HalQaran Staff	 March 14, 2020
Washington (Halqaran.com) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg-deg ah oo ku saabsan ka hortaga caabuqa halista ah ee Coronavirus. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in…
Donald Trump oo xayiraad ku soo rogay duulimaadyadii Yurub ee Mareykanka
by HalQaran Staff	 March 12, 2020
Washington (Halqaran.com) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa ku dhawaaqay xayiraad dhanka socdaal ah, oo uu sheegay in lagu soo rogayo dadka dalkiisa uga imaanaya cariga Yurub. Donald Trump, ayaa…
UPDATE: Dowladda Turkiga iyo Midowga Yurub oo la filayo inay heshiis cusub gaaraan
by Halqaran	 March 10, 2020
Brussels (Halqaran.com) – Dowladda Turkey ayaa rajeyneysa inay heshiis cusub oo lagula tacaalayo qaxootiga la gaarto Midowga Yurub ka hor kulan madaxeedka xiga ee ururka, waxaa sidaas Talaadada maanta sheegay…
Boqortooyada Sacuudiga oo Xabsiga dhigay xubno sar-sare oo ka tirsan qoyska Boqortooyada!
by Halqaran	 March 7, 2020
Riyad (Halqaran.com) – Sida ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya, in boqortooyada Sacuudiga ay xabsiga dhigtay xubno sar-sare oo ka tirsan qoyska Boqortooyada. Wararka ayaa sheegaya in ragga xabsiga la…
Turkiga oo hor-istaagayo dadka qaxootiga ah ee uu Gariigga dib u soo celinayo
by Halqaran	 March 6, 2020
Ankara (Halqaran.com) – Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ciidamo tiradoodu gaareyso 1,000 askari u direyso xadka ay la wadaagto Giriigga, si ay u hakiyaan howlgallada ay Giriigga dib ugu soo…
by Halqaran	 February 17, 2020
China (Halqaran.com) – Guo Yanhong oo katirsan maamulka mid kamid ah Isbitaallada ku yaalla Shiinaha kana tirsan Guddiga Caafimaadka ee Qaranka Shiinaha ayaa shir jaraa’id ku sheegtay in Feyraska Corona…
by HalQaran Staff	 February 13, 2020
China (Halqaran.com) – Dad gaaraya 242 qof ayaa maalin kahor ugu dhintay cudurka Corona gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, taas oo ka dhigan tiradii ugu badneyd oo maalin qura cudurka…
Hay’adda WHO oo shaaca ka qaaday inay jirto fursad lagu xakameyn karo Feyraska Korona
by Halqaran	 February 5, 2020
Nairobi (Halqaran.com) – Hay’adda Caafimaadka Addunka WHO ayaa sheegtay in ay jirto fursad lagu hor istaagi karo in feyraska Korona uu isu bedelo dhibaato caafimaad oo heer calami ah. Xoghayaha…
by HalQaran Staff	 February 1, 2020
China (Halqaran.com) – Waxaa sare u sii kacaya tirada dadka u geeriyoonaya fayraska Korona oo dalka shiinaha oo qudha ku dilay 259 qof halka dadka xanuunka la il daranina ay…